Faah faahin kasoo baxaysa waxa uu ahaa iyo cida uu katirsanaa nin Soomaali ah ay xireen Ciidamada Malaysia – Goobjoog News English
Faah faahin kasoo baxaysa waxa uu ahaa iyo cida uu katirsanaa nin Soomaali ah ay xireen Ciidamada Malaysia
Faah Faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa Nin Soomaali ah oo la sheegay in uu horey uga tirrsanaa Xarakada Al-Shabaab, kaa oo maalintii Khamiistii Ciidamada Booliiska Dalka Malaysia ay gacanta ku dhigeen.
Hay’ada amaanka u qaabilsan Dalka Malaysia ayaa sheegay in ninkan ay qabteen uu katirsanaa Dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya , mana jiraan faah faahino intaas dheer ay bixiyeen laamaha amaanka Dalka Malaysia.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya ninkan ay qabteen Ciidamada Malaysia in uu horey uga tirsanaa Saraakiisha Ururkii Xisbul Islaam ee isku dhiibay Dagaalyahanada Al-Shabaab , waxa uuna markii dambe kamid ahaa sida wararka lagu helayo Al-Shabaab.
Ninkan la xiray ayaa la tilmaamay in uu kamid ahaa Xubnihii kasoo baxsaday Xarakada Al-Shabaab markii la dilay Ibraahim Afgaan iyo Macalim Burhaan oo kamid ahaa Saraakiishii ugu sareesay Al-Shabaab, waxa ayna ragaan ku baxeen gacanta amiirkaAl-Shabaab.
Sida xogo lagu helay Ninkan hada gacanta ugu jira Ciidamada Malaysia ayaa Magaciisa waxaa lagu sheegay Abuu Yaasir Al-Muqdishi, waxa uuna kamid ahaa Xubnihii la socday Sheekh Xasan Dahair Aweys , Ciidamada Nabad Sugda Dowlada ayaa la sheegay in ay xireen ninkan kadibna ay sii dayaeen.
Sirdoonka Dalka Malaysia ayaa hada wada baaritaano dheeraad ah ay kusameenayaan ninkan loo heesto in uu katirsan yahay Al-Shabaab , waxaana Ciidamadu barayaaan sababta uu ninkan Dalka Malaysia u yimid iyo ujeedkiisa.
Scientists find new clues in quest for HIV cure
EXCLUSIVE: Somalia approved dumping of 1.5 million metric tonnes of waste from Lebanon in January
Rabshado ka aloosan mid kamid ah Dalalka Afrika oo heerka Cadaawadu gaartay in dadku is cunaan isna gubaan.
Goobjoog Archive Select Month August 2020 (15) July 2020 (66) June 2020 (96) May 2020 (120) April 2020 (114) March 2020 (100) February 2020 (110) January 2020 (141) December 2019 (115) November 2019 (123) October 2019 (132) September 2019 (137) August 2019 (92) July 2019 (98) June 2019 (76) May 2019 (88) April 2019 (139) March 2019 (137) February 2019 (139) January 2019 (154) December 2018 (180) November 2018 (164) October 2018 (186) September 2018 (180) August 2018 (188) July 2018 (221) June 2018 (190) May 2018 (161) April 2018 (158) March 2018 (180) February 2018 (153) January 2018 (194) December 2017 (225) November 2017 (257) October 2017 (253) September 2017 (196) August 2017 (192) July 2017 (158) June 2017 (182) May 2017 (181) April 2017 (224) March 2017 (267) February 2017 (254) January 2017 (319) December 2016 (213) November 2016 (218) October 2016 (258) September 2016 (262) August 2016 (360) July 2016 (258) June 2016 (224) May 2016 (244) April 2016 (240) March 2016 (276) February 2016 (297) January 2016 (224) December 2015 (226) November 2015 (251) October 2015 (280) September 2015 (309) August 2015 (326) July 2015 (351) June 2015 (269) May 2015 (293) April 2015 (274) March 2015 (385) February 2015 (360) January 2015 (397) December 2014 (286) November 2014 (272) October 2014 (259) September 2014 (251) August 2014 (285) July 2014 (217) May 2014 (5) April 2014 (33) March 2014 (56) February 2014 (57) January 2014 (73) December 2013 (6)